eHimalaya Online || News from nepal » वलिवूड अभिनेता सैफ अली खानलाई श्रीमती करीना हट नलाग्ने कुरा गरे खुलासा….
वलिवूड अभिनेता सैफ अली खानलाई श्रीमती करीना हट नलाग्ने कुरा गरे खुलासा….
२०७८ पुस २५ गते आईतबार ०८:३६
एजेन्सी, सैफ अली खान र करिना कपूरलाई बलिउडको सबैभन्दा सुन्दर जोडी मानिन्छ । सैफले करीनालाई जति माया गर्छन्, करिना पनि उनीप्रति उत्तिकै पा,गल छिन् । तर सैफलाई करीना हट नलाग्ने कुरा अभिनेता आफैले एक भिडियोमा खुलासा गरे। तपाईलाई यो...
एजेन्सी, सैफ अली खान र करिना कपूरलाई बलिउडको सबैभन्दा सुन्दर जोडी मानिन्छ । सैफले करीनालाई जति माया गर्छन्, करिना पनि उनीप्रति उत्तिकै पा,गल छिन् । तर सैफलाई करीना हट नलाग्ने कुरा अभिनेता आफैले एक भिडियोमा खुलासा गरे। तपाईलाई यो थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ कि सैफले यसो भन्दा शाहिद पनि त्यहाँ थिए ।
सैफ फिल्मको प्रमोशनमा पुगेका थिए
सैफ अली खान एक अद्भुत अभिनेता मात्र होइन एक महान व्यक्ति पनि हुन्। आज, यसको प्रमाण दिँदै, म तपाईंलाई एउटा किस्सा सुनाउँछु। वास्तवमा सैफ अली खान र कट्रिना कैफको फिल्म ‘फ्यान्टम’ रिलिज हुन लागेको थियो । यसको प्रमोशनका लागि दुबै झलक दिखलाजा सिजन ८ को सेटमा पुगेका थिए । त्यहाँ करण जोहर र शाहिद कपूर जजको कुर्सीमा बसेका थिए । करण जोहरले पनि सैफ अली खानको खुट्टा तानेर प्रश्न गरे कि उनलाई सबैभन्दा हट अभिनेत्री कुन लाग्छ ? यसका लागि उनले कट्रिना कैफ, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपडा र सोनम कपूरलाई विकल्प दिए।
सैफ अली खानले कट्रिना कैफ एकदमै प्रोफेशनल भएको र उनको अनुसार अभिनेत्रीलाई सबैभन्दा हट ठानेको बताए । करण र अन्य प्रतियोगीहरू त्यहीँ बसेर चर्को स्वरमा हाँस्न थाले । शाहिद पनि आफ्नो हाँसो रोक्न सकेनन् । करणले फेरि सैफलाई सबैभन्दा हट को हो भनेर सोधे र उनले आफ्नी पत्नी करीना कपूर सबैभन्दा हट नभएको बताए । यसो गर्दा करण जोहरले नेशनल टिभीमा सैफसँग निकै रमाइलो गरेका थिए । सैफले पछि आफूले भनेको कुरा बुझे र करणको प्रश्न दोहोर्‍याउँदा उनले आफूले केही सुन्न नसकेको भन्न थाले।
सैफ अली खानलाई फसाएको देखेपछि शाहिद पहिल्यै सचेत थिए । त्यसैले जब शाहिदलाई सोही प्रश्न सोधियो, उनले आफ्नी श्रीमती मीराको नाम लिए र उनलाई सबैभन्दा हट भने। यसपछि उनले दोस्रो नम्बरमा कट्रिना कैफको नाम लिए । यसै क्रममा कट्रिना कैफलाई सोधियो कि उनलाई सबैभन्दा से,क्सी को लाग्छ ? शाहिद कपूर, सैफ अली खान, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह र वरुण धवन विकल्पमा थिए। आँखा झिम्क्याउँदै उनले एउटा मात्र नाम लिए र त्यो रणवीर कपूर हो । उनले रणबीर कपुरको नाम एक पटक नभई लगातार तीन पटक लिए। यो त्यो समय थियो जब दुबै एकअर्कासँग सम्बन्धमा थिए ।
प्रकाशित मिति २०७८ पुस २५ गते आईतबार ०८:३६